पर्यटन बर्षका लागि काम जरुरी::Online News Portal from State No. 4
पर्यटन बर्षका लागि काम जरुरी
पर्यटन वर्ष २०२० को औपचारिक सुरुवात पोखराबाट गरिएको छ । २० लाख आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउने महत्वकांक्षी परियोजनासहित सुरु गरिएको भ्रमण वर्षको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले उद्घाटन गरे । उनले पर्यटनमार्फत आर्थिक सम्मृद्धि हाँसिलको लक्ष्यमा यो अभियानलाई पहिलो कदम भएको बताए । सरकारले आउँदो अङ्ग्रेजी वर्षलाई नेपाल पर्यटन वर्ष घोषणा गरी त्यसै अनुरुपका गतिबिधिहरु संचालन गर्ने सिलसिलामा यो कार्यक्रम आयोजना भएको हो । सरकारले पर्यटन वर्ष घोषणा त गर्ने तर काम भने केही पनि नगर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले आलोचना गरिरहँदा भएको घोषणाले अब त केही हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ । यता, यो घोषणाले आन्तरिक पर्यटन वर्ष २०१९ घोषणा गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पनि भरथेग गरेको छ । आन्तरिक भ्रमण वर्ष घोषणासँगै गण्डकी सरकारले घरबास कार्यक्रमलगायतका केही पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गरे पनि घोषणाजस्तो काम भने भएको छैन ।
नेपालको पर्यटन उद्योगको इतिहास लामो छैन । खासगरी बिटल्स ब्याण्डका जोन लेननको भारत यात्रापछि हिम्पीहरु भारततिर ओइरिए । मोक्षको खोजीमा हिँडेका उनीहरु भारतको गर्मी छल्न नेपाल छिरे । नेपालको हावापानी र प्राकृतिक सुन्दरताले उनीहरुलाई मोहनी लगायो । यहाँको वातावरणमा रमाएका उनीहरुले नै नेपालको प्रचार गरिदिए । विभिन्न देशका पर्यटकहरु नेपाल भित्रने क्रमले तीव्रता पायो । अर्कोतर्फ सन् १९५० को दशकबाट सुरु भएको नेपालको आरोहण गतिबिधिले पनि पर्यटक बढाउन योगदान दियो । पर्यटन व्यवसायीहरुका अनुसार जनस्तरबाट नेपालको जति प्रचार भएको छ, त्यति राज्यले गर्न सकेको छैन । नेपाल आउने पर्यटकहरुमध्ये झण्डै आधाजतिले पटक–पटक नेपाल भ्रमण गर्ने गरेको तथ्यले पनि सरकारले नेपाललाई विश्वमा चिनाउने काम गर्न नसकेको प्रुष्टी हुन्छ । नेपालबाट फर्केकाहरुले आफ्ना साथीभाई र आफन्तलाई नेपालबारे सुनाउँदा प्रभावित हुनेहरुले पनि नेपालको पर्यटनलाई भरथेग गरेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपालले पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड गठन गरी पर्यटन प्रवद्र्धनको काम गर्दै आए पनि त्यसको गति सुस्त रहेको छ । अहिले पनि संसारका धेरै नागरिकले नेपालबारे जानकारी राख्दैनन् । चिन्दै नचिनेको ठाउँमा को पो जान्छ र ? अहिलेको संसार भनेको प्रवद्र्धनको हो । जसले प्रवद्र्धन गर्न सक्छ, जसको विज्ञापन बढी हुन्छ, त्यही ठाउँमा पर्यटक जान्छन् ।
अर्कोतर्फ पर्यटकहरु भनेका पैसा खर्च गर्न आउने पाहुना हुन् । उनीहरुले मनोरञ्जन, सुरक्षा र सजिलो खोज्छन् । हामीकहाँ पर्यटकले चाहेजस्तो पूर्वाधार बनेका छैनन् । अझ, बिलासी पर्यटकहरुका लागि त हाम्रा पूर्वाधारहरु लाजमर्दा छन् । आरोहणले मात्र पर्यटन धानिँदैन । भ्रमण वर्षको घोषण गर्दा सरकारले पर्यटकको सुरक्षा, पर्यटकी पूर्वाधारमा लगानी र ब्यापक प्रचारको अभियान थाल्नुपर्छ । नेपाल आउन चाहने पर्यटकहरुलाई हवाई बाटो सजिलो पार्नुपर्छ । नेपाल आउन चाहनेहरुले अहिले महंगो हवाई भाडा तिर्नुपर्छ । त्यतिमात्र नभएर समय पनि बढी लाग्छ । पर्यटकहरु भनेकाम घुमन्ते हुन् । उनीहरु सजिलो र मन परेको ठाउँमा यात्रा गर्छन् । प्रकृतिको काखमा रमाउन चाहनेहरुलाई आकर्षित गर्न पनि प्रचारमा त ध्यान दिनैपर्छ । विदेशमा हुने विभिन्न ट्राभल मार्टहरुमा सहभागिता जनाउनुपर्छ । अब डिजिटल मार्केटिङको लागि ढिला गर्नुहुँदैन । मुखले घोषणा गर्दैैमा पर्यटक आउँछन् भन्ने भ्रममा परियो भने नेपाल भ्रमण वर्ष नाममा मात्र सिमित रहन्छ भन्ने यथार्थलाई सरकार र सरोकारवाला निकायले बेलैमा बुझ्नुपर्छ ।